Sarudzo dzinoita sei pamusika wekuSpain? | Ehupfumi Zvemari
Pa 28, veSpain vane musangano nemavhoti. Asi varimi vemari vanofarirawo kwazvo kuziva kuti zvichaitwa sei mumisika yemari muzuva rinotevera zvichienderana nehurumende inogona kuumbwa kuSpain mumakore mana anotevera. Ichi chinhu chiri kukonzera kufamba kwekuyambuka muIbex 35 kuri kukonzeresa kuti ifambe munzira yakatetepa pakati pe9.100 uye 9.600 mapoinzi izvo zvaari kunetseka kubuda izvozvi. Kumirira zvinogona kuitika paSvondo yekupedzisira yemwedzi wekuvhura.
Mimwe misika yemasheya yakanyanya kunetsekana kupfuura mimwe ine chekuita nevakuru vanogona kuumbwa mushure mesarudzo huru mwedzi uno. Kunyanya, izvo zvinoenderana nazvo zviito zvehurumende uye kuti ndivo vari kumirira zvinogona kuitika pazuva idzva resarudzo iri. Iko kunojekeswa kuti panogona kuve nehurumende yechimwe kana chimwe chiratidzo uye nemitemo yakatosiyana yehupfumi pakati pavo. Chinhu chinochengeta zvidiki uye zvepakati kudyara mukutarisira.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti kuenzana kweSpanish kunoenderana nemamiriro ezvinhu epasi rose emisika yemasheya uye ichi chikamu chinogona kuve chakanyanya kukosha kune ramangwana reramangwana rayo kubva zvino zvichienda mberi. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Chero zvazvingaitika, ziso revatengesi vevatengesi riri pa28 A kuziva zvekuita. Kunyangwe kuvhura zvinzvimbo kana kuzvishandura Akatarisana nemamiriro asingafadzi ezvaanofarira muhukama hwake nenyika inogara yakaoma yemari.
1 Sarudzo: zvikamu zvakaomarara
2 Mutemo wekambani dzemagetsi
3 Vanachiremba vanoteerera zvakanyanya
5 Iko musika wekutengesa unotaurirana 34.000 miriyoni
Sarudzo: zvikamu zvakaomarara
Ehezve, kune mamwe matunhu ayo achange achinyatsoziva sarudzo dzesarudzo kupfuura mamwe uye izvi zvinoonekwa ne kuderera muhuwandu hwekubvumirana mumisika yemari. Imwe yeakanyanya kukosha ibhangi rakamirira zvinogona kuitika pazuva iri. Muchirevo chakajairika, umo kukosha kwayo kunoramba kuri kunetseka kudzikira kumashure kumashure. Nekuderera kwakakosha mumabhangi ese akanyorwa pamusika wepasirose unoenderera uye izvo zvakatungamira kumutengo wemasheya avo kuve pachena zvinonakidza, kunyangwe paine njodzi yekuti vacharamba vachiderera mumazuva anotevera.
Uye zvakare, hatigone kukanganwa kurudziro huru iyo iyo banking sector yekumisikidzwa kweiyo yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35. Nechiremera chakati chisina chimwe chikamu chebhizinesi parizvino. Kusiyana nezvinoitika mumisika yemasheya yasara yekondinendi yekare. Mupfungwa iyi, hakuzovi nesarudzo asi kunyatso tarisa kune izvo zvinoitika chaizvo nemitemo iyi. Kune rimwe divi, ivo vari munzvimbo yakaoma kwazvo uye neimwe yemitengo yakaderera mumakore apfuura. Iko chero kuyedza kusimuka kwakashongedzwa mubhudhi neiyo yakasimba yekutengesa ikozvino.
Mutemo wekambani dzemagetsi
Imwe yezviitiko zvine hunhu ndeye iyo magetsi ekupa makambani Ndivanaani vanonyanya kufarira kuziva chiratidzo chemuvara wehurumende inotevera munyika medu. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti chikamu chebhizinesi ichi chine hanya zvakanyanya nematanho angatorwa nemutungamiriri anotevera nekuti zvinoenderana navo kuti vanogona kugara sezvavari kana kukuvadzwa mune zvido zvebazi ravo. Nepo iyo yepakati-kurudyi bloc iri mukufarira kusimudzira kumwe kusununguka kwechikamu, kubvisa rubatsiro uye kubviswa kwezvipingamupinyi zvekupinda. Kusvika pakuti iyo yakawanda isina chokwadi mamiriro angave akagadzirwa kumagetsi makambani anofanirwa kufungisisa yavo bhizinesi modhi. Chinhu chinogona kutungamira kumutengo wemasheya ayo uchiderera mumavhiki anotevera.
Kunyangwe pane izvo zvinopesana, mune rimwe bato rezvematongerwo enyika mhinduro yemakambani aya anga achifarira kubvira zhizha rapfuura. Nekuwedzera mumakambani ari muchikamu vanenge 30% uye izvo zvakatungamira zvimwe zvehunhu hwayo kumamiriro echokwadi emahara kusimuka. Mune mamwe mazwi, pasina kupokana kwakakosha kumberi uye izvo zvinogona kuvatorera kumatunhu akakwirira mumutengo wavo pamisika yemari. Sezvo mune chaiwo kesi dzeIberdrola, Endesa kana Naturgy. Kunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti ivo vari kuratidza kumwe kuneta muzvikamu zvekupedzisira zvekutengesa. Nesimba shoma rekuramba uchikwira uye nevhoriyamu yekutengesa iri pasi pane nakare.
Vanachiremba vanoteerera zvakanyanya
Imwe chikamu chiri kusahadzika ichave ichinyatsoziva nezvesarudzo ndiye wemishonga, uyo angawana zvigaro nezvisarudzo zvesarudzo, zvese zviri zviviri PSOE neCiudadanos. Kunyangwe pane zvinopesana, zvinogona kunge zvichitadza nehumwe sarudzo dzesarudzo dzinotsigira kubvisa mukana wekuwana rubatsiro rwemahara. Kusvika pakuti mazuva ano iri kuratidza kusagadzikana kupfuura akasara masitoko emakesi akatarisana nezvingaitika pazuva resarudzo. Hazvishamisi kuti zvinonyanya kufanoonekwa kuti ichave iri yeinonyanya kufamba mushure me28 A, mune imwe pfungwa kana imwe.
Nepo kune rumwe rutivi, zvinoramba zvichizivikanwa kuti zvichaitwa sei nemakambani emafuta kuchinoitika chezvematongerwo enyika chisati chaitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika seta mutero wedhiziri kuenzanisa mutengo neuyo wepeturu. Izvo pasina mubvunzo zvichaona kuti mutengo wemasheya ako unoenda kune rimwe divi kana imwe yacho chiyero. Inokanganisa imwe yeakakura bhuruu machipisi emunyika equities senge Repsol, iri parizvino imwe yemitengo yakakurudzirwa nechikamu chikuru chevanoongorora zvemari. Nemvumo yekutenga zvikamu zvavo zvepakati nepakati. Kune rimwe divi, kugadzira imwe yemubhadharo wakakwira kwazvo pamusika, iine avhareji yekufarira yakatenderedza 6%.
Chero nzira, chinhu chine musoro kuita mazuva ano kumirira zvinogona kuitika pazuva resarudzo muna Kubvumbi. Kuti hatigoni kukochekerwa mune zvimwe zvezviito zvinogona kuita zvakashata musarudzo idzi. Pakupera kwezuva kune mazuva mashoma kwazvo ekuziva mhedzisiro uye hazvina kukodzera kuisa pangozi mari yedu iripo yekudyara. Kana iko kusahadzika kwakakosha kwagadziriswa, sarudza kuvhura nzvimbo munzvimbo dzakanakisa pamusika wemasheya kubva muna Chivabvu.
Ichiri kune rumwe rutivi, zvinoita sekunge musika wekuSpain wemusika hausi kuzofamba nekuchinja kwakanyanya mumazuva ano sarudzo dzisati dzaitwa. Nekudaro, mashandiro mune zvese zvingangodaro aisazobatsira zvakanyanya mune chero ezvikamu zvebhizinesi zvinotengeswa pachena. Izvo hazvina kukodzera, saka, kuisa panjodzi sezvo iri zvisina kunaka kuvhura zvinzvimbo munguva dzino sezvo paine njodzi yekurasikirwa nemari pane kuikunda. Ichi ichokwadi chinoiswa kune vashoma nevapakati varimimari vasingazive zvekuita panguva ino chaiyo. Iko kusava nechokwadi kwemisika yemari ichokwadi icho chinomisikidza mamiriro ayo pamisika yemasheya. Kunze kwekuti dzimwe rally dzinogona kugadzirwa mumitengo yezvikamu zvemakambani akanyorwa pamusika wemasheya.
Iko musika wekutengesa unotaurirana 34.000 miriyoni
VaSpanish Stock Market vakatengesa 34.680 mamirioni euros muzvikamu munaKurume, 7,2% kupfuura muna Kukadzi uye 29,6% pasi pemwedzi mumwecheteyo wegore rapfuura. Huwandu hwevatengesi hwakakura ne12,5% ​​zvichienzaniswa naFebruary, kusvika pamamirioni 3,1, 17,8% pasi paMarch 2018. Muchikamu chekutsinhana-mari (ETF) chikamu, 137,8 mamirioni euros akatengeswa, 8,7% kupfuura muna Kukadzi uye 38,6% yakaderera pane munaKurume 2018. Huwandu hwekutaurirana hwaive 5.381, zvinoreva kuwedzera kwe16,3% zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura uye kuderera kwe34,2, 2018% zvichienzaniswa naMarch wegore rapfuura, muna XNUMX.
Nezve musika wakatarwa wemari, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti munguva ino yakaramba iine chiitiko chepamusoro chezviitiko. Iyo huwandu hwakazara huwandu Mumwedzi mitatu yekutanga yegore yakakura ne 88,9%, mushure mekunyoresa kutaurirana kwemamirioni makumi matatu nemasere nemakumi matatu nemaviri emwedzi waKurume, 38.632% yakakwira kupfuura iwo iwo mwedzi wa109,9. Pamusoro pezvo, nyaya dzakabvumidzwa mukutengesa dzakawedzera ne2018% kubvira kutanga kwegore uye chikamu chakasarudzika chakawedzera 13,8%. Mukutsvaga kwekuti misika yemari yeSpain iri kuita sei pamberi pezuva rakakosha resarudzo muna Kubvumbi. Nepo pakupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo yakavhurika nzvimbo yeiyo seti yemari zvigadzirwa zvakawedzera mune ino nguva ne3,5% zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chetewo wegore rapfuura. Huwandu hwekutaurirana hwaive 2,2, zvinoreva kuwedzera kwe5.381% zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura uye kuderera kwe16,3% zvichienzaniswa naMarch 34,2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Sarudzo dzinoita sei pamusika wekuSpain?